Masar: Dadaallo Xukuumad lagu soo Dhisayo
Hogaamiyeyaasha KMG ee dalka Masar ayaa ka shaqeynaya sidii ay u soo dhisi lahaayeen xukuumad, xilli ay diidmo ka imanayso xisbiyo siyaasadeed oo aan la dhacsaneyn dhabaha uu dalku u hayo, ka dib markii madaxweyne Maxamed Mursi xilkii laga tuuray.
RW-ha KMG Xaazim el-Biblaawi ayaa Khamiista maanta ah qiimeynaya wasiiradda uu xukuumadiisa u dooranayo, iyada oo hogaamiyeyaasha ururka Ikhwaanul muslimiinka ee Maxamed Mursi ayaa diideen inay wax kaalin ah ku yeeshaan xukuumadda cusub, isla markaana ay cambaareeyeen xir-xirniinka Arbacadii shalay lagu baaqay in madaxda ururka lagu soo qabqabto.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee dalka Masar ayaa amray in lasoo xiro hogaamiyaha ururka Ikhwaanul muslimiinka Maxamed Badiic, ku-xigeenkiisa iyo 8 kale, xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in raggaasi ay kiciyeen gacan ka hadalkii keenay in 51 qof ay Isniintii ku dhintaan magaalada Qaahira.
Afhayeenka ururka Ikhwaanul muslimiinka ayaa soo xirida madaxda ururka ku sheegay inay tahay isla hanaankii hore ee dawlad booliis ah. Ururka ayaa ku baaqay dibadbaxyo waaweyn oo Jimcaha dhaca.
Dawladda Maraykanka ayaa qiimeynaysa dhacdadii toddobaadkii hore Madaxweyne Mursi xilka lagaga tuuray. Haddii dawladda Maraykanku ay go’aamiso in militarigu uu afgambi sameeyey, sharciga Maraykanka ayaa qoraya in dawladdu ay goyso kaalmada Maraykanka uu siiyo Masar, taasoo kor u dhaafaysa 1 bilyan oo dollar.